အသက်တစ်နှစ်ကြီးပြန်ပေါ့ – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
February 10, 2009 by ကုမ်ရာသီသူ
ဒီနေ့ ကျွန်မရဲ့ မွေးနေ့ပါ။ မှတ်မှတ်ရရ ထိပ်စီးဂဏန်း အပြောင်းအလဲ ရှိတဲ့ မွေးနေ့ပါ။ ၂ ထိပ်စီးကနေ ၃ ထိပ်စီးပေါ့။ (ချဲဂဏန်းတွေ၊ နှစ်လုံးဂဏန်းတွေ ပေးနေတယ်ဆိုပြီး ပြန်မဖွကြနဲ့နော် 😀 )
သူငယ်ချင်းတွေကို မုန့်ကျွေး၊ အအေးတိုက်ပြီး ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အထက်တန်းအောင်ဘ၀ မွေးနေ့၊ အလုပ်ထဲမှာ ပင်ပန်းလွန်းလို့ ပြီးမှန်းမသိ ပြီးသွားတဲ့ အလုပ်ဝင်ခါစဘ၀ မွေးနေ့၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ဆွမ်းပို့ရင်း မွေးနေ့မှာ တရားအမြတ်ထွက်အောင် တရားထိုင်သွားဖို့ ဘုန်းဘုန်းက တရားပေးတော့ အီလည်လည်နဲ့ မသက်မသာ အရင်းအတိုင်းဖြစ်သွားတဲ့ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် မွေးနေ့။ မွေးနေ့ပေါင်း အခု 20 ကျော်မှာ ကိုယ့်မွေးနေ့ရယ်လို့ မှတ်မှတ်သားသားရှိတာ လက်ချိုးရေလို့ ရပါရဲ့။ အခု ထိပ်စီးပြောင်းသွားတော့ ဘယ်လိုဆင်နွှဲရင် ကောင်းမလဲလို့ စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်။ သေချာတာတော့ ကျွန်မ ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးဖြစ်တဲ့ ဘလော့မှာ စာရေးဖြစ်သွားတာပဲ။
ဒီဘလော့လေးကိုပဲ အိမ်ကလေးတစ်လုံးအဖြစ် မွမ်းမံလာခဲ့ပြီဆိုတော့ အိမ်ရယ်၊ ဧည့်သည်ရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီပေါ့။ ကျွန်မအိမ်ကလေးမှာ မွေးနေ့ အထူးအစီအစဉ်အဖြစ် မေတ္တာရပ်ဝန်းမီးဖိုဆောင်ကို ပို့ပြီး ရွှေရင်အေးနဲ့ ဧည့်ခံရမယ်။ မလုကိုလည်း ခွင့်တောင်းထားပါတယ်။ အဲဒီမှာ အချိုပွဲတွေလည်း အများကြီးပဲ။ ကိတ်မုန့်လှီးဖို့တော့ အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။ 🙂 အဲဒီအစီအစဉ်အတွက် ဖယောင်းတိုင်မလောက်လို့ပါ 😛
ကျွန်မကိုယ်တိုင်က ၀ိုင်ကို အလွန်နှစ်ခြိုက်ပေမယ့် ၀ိုင်တော့ မစိမ်တတ်ပြန်ဘူး။ ဒီတော့ ဖိုင်နယ်တုန်းက chemical က သူငယ်ချင်းတွေကို သတိရမိတယ်။ သူတို့က ၀ိုင်စိမ်ရတဲ့ Project လေ။ သူတို့ရဲ့ ၀ိုင်တွေကို ဒိုင်ခံ မြည်းပေးခဲ့တာကို လွမ်းလာတယ်။ ဆိုင်လည်း မဆိုင်ဘူးနော်။ ရွှေရင်အေးရယ်၊ ကိတ်မုန့်ရယ်၊ ၀ိုင်ရယ်၊ ကျွန်မသတိရမိတဲ့ အရာတွေက ကျွန်မကို ပြောင်ပြနေကြတယ်။ ဒီပို့စ်မှာ ကျွန်မစိတ်က လျှောက်သွားတဲ့အတိုင်းပဲ ကျွန်မရေးဖြစ်တယ်။
အစားအသောက်တွေထက် ကျွန်မစိတ်မှာ သီးသန့်ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းလေးတွေလည်း ရှိတယ်။ မိသားစုဘ၀ကို ၁၆ နှစ်သမီးရဲ့ နောက်ပိုင်း အပြည့်အ၀ မခံစားဖြစ်ခဲ့တော့ အဲဒီဘ၀ကို အစောဆုံး နှစ်ချို့ခံလိုက်တယ်။ ၁၀တန်းအောင်စာရင်းထွက်ပြီးကတည်းက ဘော်ဒါတစ်ခုမှာ စာကျက်အကူ သွားလုပ်လိုက်တာကနေ ကျောင်းတက်တဲ့တောက်လျှောက် အိမ်ကို အလည်လောက်ပဲ ပြန်နိုင်တော့တာကိုး။ ကြာလာလေ အရှိန်တက်လာလေ၊ အချိုပြင်းပြင်းနဲ့ တခြား လောကဓံတွေက Fermented Gas တွေထက် ရှတတ နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ တောရောက်၊ တောင်ရောက်၊ တောမရောက်တောင်မရောက် အလုပ်တွေလည်း လုပ်ဖြစ်ခဲ့၊ ဘ၀ကျောင်းမှာ ကျောင်းသားဆိုးလည်း လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အမေကတော့ အဲဒီဝိုင်ချစ်သူကို ဘယ်ခရီးရောက်မလဲ စောင့်မကြည့်နိုင်ခဲ့တော့ဘူး။ ဒီတော့လည်း ကိုယ်နှစ်ချို့ခံပြီး သိမ်းခဲ့တဲ့ ဘ၀မှာ အခါးပြင်းပြင်းက ပိုကဲလာခဲ့ပြန်ရော။ ဒါကပဲ ဘ၀ရဲ့ အရသာတစ်မျိုးလို့ အောက်မေ့မိပါတယ်။
အရင်တုန်းက ကျွန်မရဲ့ ဘလော့မှာ လာဖတ်သွားပြီး ကုမ်ရာသီသူအဖြစ်ပဲ သိထားတဲ့ ဧည့်သည်တွေကို ကျွန်မရဲ့ နောက်ထပ် အိမ်လေး တစ်လုံးကိုပါ မိတ်ဆက်ပေးရမှာပေါ့။ ကွန်နက်ရှင် ပြဿနာတွေ မစမီ ဟိုးအရင်ကတည်းက လက်တည့်စမ်းထားတဲ့ ကျွန်မရဲ့ အိမ်အိုလေးပါ။ ပရိဘောဂတွေ ဖြည့်လိုက်၊ ဖြုတ်လိုက်၊ တံခါးဆီထည့်လိုက် လုပ်ထားခဲ့ရတဲ့ အိမ်လေးပေါ့။ ဘ၀နဲ့ ရှင်သန်ခြင်း လို့ နာမည်ပေးထားပါတယ်။ အခုတော့ ကျွန်မရဲ့ အိမ်နှစ်လုံးကို ကျွန်မက အမည်ပေါက် ကြေငြာလိုက်ပါပြီနော်။
ကျွန်မ ချန်ထားပစ်ခဲ့တယ်လို့ ထင်ထားခဲ့ပေမယ့် ကျွန်မနဲ့အတူ အရိပ်လိုပါလာတဲ့ အတိတ်တွေ၊ ကျွန်မသယ်လာတယ်လို့ ထင်ပေမယ့် ဝေးကွာ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ မသစ်တသစ် အကြောင်းအရာတွေ ……… အဲဒါတွေ အားလုံးဟာ ကျွန်မရဲ့ ၀ိုင်နဲ့ ထပ်တူပြုထားတဲ့ ဘ၀မှာ အရသာမျိုးစုံ ထပ်ဖြည့်ပေးနေတုန်းပါပဲ။
အခုတော့ ကျွန်မဆုတောင်းဖို့ စိတ်ကူးရပြီ။
ကျွန်မအနေနဲ့ သူများတွေအတွက် အသုံးမ၀င်မယ့် အကူအညီတွေချည်း ပေးမိတာ မဖြစ်ရအောင် ကိုယ်တိုင်ကို အရင် ဖြည့်ဆည်းရမယ်။
ကျွန်မ ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေ၊ ကျွန်မကို ချစ်ခင်ကြသူတွေ၊ ပြီးတော့ လူ့ဘ၀မှာ အသက်ရှင် ရပ်တည်နေဖို့ ရုန်းကန်နေကြရသူတွေအားလုံးဟာ သူတို့စိတ်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝပြီး သူတို့ရဲ့ဘ၀မှာ သူတို့နည်းသူတို့ဟန်နဲ့ ပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့ ကျွန်မ ဆုတောင်းရမယ်။
ကျွန်မဘ၀မှာ ရှေ့လျှောက် ကြုံတွေ့ရဦးမယ့် အခက်အခဲ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေကို အဲဒါတွေထက် ခက်ခဲနိုင်တဲ့ အတားအဆီးတွေအတွက် ခြေနင်းခုံအဖြစ် ကျွန်မ သဘောထားနိုင်ရမယ်။
နောင်လာမယ့် နေ့တွေမှာ “တကယ်လို့” ဆိုတာနဲ့ “အဲဒီလိုသာဆိုရင်” ဆိုတာတွေကို ကျွန်မ ကြိုးစားရှောင်ကျဉ်နိုင်ရမယ်။
တရုတ်ရိုးရာဗေဒင်အရတော့ ဆိတ်နှစ်မှာ မွေးဖွားသူ ကျွန်မအတွက် နွားနှစ်က သိပ်ပြီး ကြည်ကြည်သာသာ ကြိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မတော့ နှစ်ထိပ်စီးကနေ သုံးထိပ်စီးကို အလိုအလျောက်ကြီး ရောက်သွားပါပြီ။ ဒီတော့လည်း …………. အင်း၊ ကျွန်မတော့ အသက်တစ်နှစ်ကြီးလာပြန်ပြီကိုးလို့ ရေရွတ်ရုံပါပဲ။
(ဟိုရောက်ဒီရောက် ရေးထားဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးကို အားနာပါတယ်နော်။ ဟိုဘက်အိမ်လေးကိုလည်း ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် လည်သွားကြပါဦး၊ အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။ 😀 ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။ )
From Ko Ko Aung's Collections
This entry was posted in ဟိုဟိုဒီဒီ and tagged Birthday Present, Life, Prayer. Bookmark the permalink.
← စေ့စပ်ဖြန်ဖြေခြင်း အနုပညာ
Alexandra Arch သွားတောလား →
9 thoughts on “အသက်တစ်နှစ်ကြီးပြန်ပေါ့”
Republic | February 10, 2009 at 1:10 pm
ဟက်ပီး ဘဒ်ဒေးပါ ။ မွေးနေ့မှာ လိုအင်ဆဒ္နတွေပြည့်ပါစေ ။
တောကျောင်း | February 10, 2009 at 1:25 pm
ဆင့်၍ ဆက်၍ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေကြောင်း…
ကျွန်တော့်ထက် ရက်ပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်ကြီးသော
ကုမ်ရာသီသူ | February 10, 2009 at 1:46 pm
ဆြာတောကျောင်းရယ်- သူဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကို သူပဲ နာမည်ယူထားပြီးတော့။ ကျွန်မက အတည်ဖြစ်အောင် ခေါ်ပေးတာပါ- ကဲနောက်များတော့ ကိုတောကျောင်းပေါ့-နှော။ မွေးနေ့ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးပါဗျား။
Mr. Republic ရေ- ကူညီဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းဗျား။
စကားမစပ်၊ ကျွန်မက ‘ဗျား’ ကို နှုတ်ကျိုးနေတာတော့ ခွင့်လွှတ်ပါရန် တစ်လက်စတည်း တောင်းပန်ပါကြောင်း- နှော။
ုkom | February 11, 2009 at 4:19 pm
ကုမ်ရာသီသူ | February 12, 2009 at 7:12 am
thanksalot Ma Ma K O M. 😀
kaungkinpyar | February 24, 2009 at 11:26 am
ကောင်းကင်ပြာကို သိတယ်၊ရောက်ဖူးတယ်ဆို့ ပြန်လာလည် သွားပါတယ်၊ ကျွန်မမှာ ကောင်းကင်ပြာ ဆိုတဲ့ အိမ်လေး တလုံးပဲ ရှိတာပါ၊မခင်ဦးမေက ကြော်ငြာပေးတာပါ၊ စာတွေ လာဖတ်မယ်နော်၊ အမကတော့ ကိုယ်အသက်ကြီးတာ ကိုယ်ပဲ သိလို့ မွေးနေ့ကို မှတ်မထားမိဘူးကွယ်၊ ထိပ်စီးလေးတွေ နောက်ပိတ်လေးတွေ ပြောင်းတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်ပါစေ
ကုမ်ရာသီသူ | February 24, 2009 at 1:55 pm
အဟဲ၊ အဲဒါဆို ကောင်းကင်ပြာနာမည်နဲ့ Profile မှာတွေ့မိတဲ့ဘလော့ စာမျက်နှာက နှစ်ခု ဖြစ်နေလို့ပါဗျ။ တွေ့ပုချိနော်အမ။ ၊ အမ KOM လို ကြွေးကြော်မယ်။ ငါမအိုသေး :P၊ လာလည်တာ ကျေးဇူးပါခင်ဗျ။
MrDBA | March 28, 2009 at 2:40 am
မွေးနေ့ကလာတာ နောက်ကျနေပြီ။ လင့်ယူလိုက်ပြီ။ နောက်ကျသွားလို့ ဘွာတေး
ကုမ်ရာသီသူ | March 28, 2009 at 3:25 am
ကိစ္စနမချိပါဘူးဗျာ။ 🙂 သူ့ဘာသာသူ ဖြတ်သွားတဲ့ မွေးနေ့ကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အမှတ်တရတွေ၊ ဘာတွေ လုပ်ဖြစ်တာပါ။ လာလည်ရင်ကို ၀မ်းသာတာပါ။